दाममले के गर्छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki damnum
1 एक लान्न के हो?
2 दाममले कसरी संकेत गरेको छ?
2.1 उदाहरण: दमन को गणना
3 Agio र Disagio
3.1 उदाहरण: अभ्यास मा Agio र Disagio
4 उधारकर्ताको लागि परिणाम
एक लान्न के हो?
एक damnum एक उधारकर्ता द्वारा उधारिएको रकम र उसको भुक्तानी रकम बीचको फरक फरक छ। Damnum उधारकर्ताहरू र दाताहरू बीच स्पष्ट सम्झौताको अंश हो। उदाहरणका लागि, एक प्रसोधन शुल्क हो। शेयरहरू पनि डनमममा समावेश गर्न सकिन्छ। दमम, एगियो र डिभिगियोका दुई प्रकारहरू छन्।
दाममले कसरी संकेत गरेको छ?
Damnum उधारकर्ता र ऋणदाता बीच सम्झौताको अंश हो र लेखनमा परिभाषित गरिएको छ। सम्झौता अन्तर्गत, यो पनि निर्णय गर्न आवश्यक छ कि एगियो वा छूट को गणना गरिएको छ कि छैन। क्रेडिट संस्थाहरू सामान्यतया एक दृष्टिकोण छ जुन तिनीहरू रुचि गर्छन् र उधारकर्तालाई प्रस्ताव गर्छन्।
लान्न आम तौर पर प्रतिशत को रूप मा व्यक्त गरिन्छ। यसले नामांकित मूल्यलाई बुझाउँछ।
उदाहरण: दमन को गणना
यदि तपाईं एक क्रेडिट संस्था 10.000 यूरोबाट उधार लिनुहुन्छ भने, बैंकले तपाइँसँग प्रशोधन फीस को कवर गर्न को लागी एक लानम को व्यवस्था गर्न सक्छ। यस उदाहरणमा मानिन्छ कि दामुम 8% हो।
तदनुसार, 800 को एक हानिकारक हुनेछ। जब यो राशि चार्ज गरिएको छ, यसले यो एक एरिओ वा असहज हो कि भनेर निर्भर गर्दछ।
Agio र Disagio
अगम र डिभिग्युम दमम को दुई प्रकार हो। यदि तपाइँ एक उधारकर्ताको रूपमा एग्रीयोसँग सहमत हुनुभयो भने, तपाइँले तपाइँको ऋणदाताबाट पूर्ण सहमत नामक मान प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईंको क्रेडिट फिर्ता भुक्तानी गर्दा, तथापि, तपाईंले थोडा बढी तिर्नु भएको सम्मसम्म तपाईंले न केवल नामांकन मान, तर हानिकारक पनि फिर्ता तिर्नुभएको छ। यसैले प्रीमियम पनि प्रीमियमको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
नियमको रूपमा, एक उधारकर्ताले उधारेको रकम फिर्ता एक टुक्रामा तिर्न सक्दैन, तर बिस्तारै, यकिनमा। एक युगमा, सामान्यतया, हरेक दर नाममात्र मानको भाग र डनममको एक भागबाट बनाइएको छ।
यदि तपाईं उधारकर्ताको रूपमा असहमतसँग सहमत हुनुहुन्छ भने, तपाईंले पूर्ण रकम पाउनुहुनेछ जब तपाईं ऋण तिर्न सक्नुहुन्छ। यसको सट्टा, वास्तविक रकम भुक्तानी दमम द्वारा कम हुन्छ। यस कारणको लागि छूट पनि छूटको रूपमा चिनिन्छ।
उदाहरण: अभ्यास मा Agio र Disagio
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं 10.000 यूरो उधार क्रेडिट संस्थाबाट लिनुहुन्छ र प्रीमियम फेरि 8% हो। तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि तपाईं 10 यूरोको 1.000 किस्तमा ऋण फिर्ता गर्नुहुनेछ।
प्रत्येक दरमा, Agios को एक-दसौं थपिएको छ: यस अवस्थामा तपाईँले 1.000 यूरो तिर्न, तर 1.080 यूरो प्रति दर छैन भने, यदि प्रीमियम खातामा लिइन्छ भने।
असहयोग को घटना मा, तपाईं 10.000 यूरो को एक निवल मूल्य मा तपाईंको ऋणदाता संग सहमत हो, तर तपाईं केवल 9.200 यूरो प्राप्त गर्नेछन्। भिन्नता छूटसँग मेल खान्छ। यस उदाहरणमा, तपाईले अझै पनि पूर्ण 10.000 यूरोलाई तपाइँको ऋणदातामा दिनुहुन्छ। यदि तपाईंले अघिल्लो किस्तिक भुक्तानीलाई अघिल्लो उदाहरणको रूपमा सहमत गर्नुभएको छ भने, तपाइँ प्रति किन्टिङ 1.000 यूरो तिर्नुहुनेछ।
उधारकर्ताको लागि परिणाम
कारण Damnums यो अक्सर एक उधारकर्ता एक उच्च ऋण स्वीकार गर्नुपर्छ कि हुन्छ। तपाईं बाहिर एक निर्माण परियोजनामा ​​10.000 यूरो ठ्याक्कै लगानी गर्न, उदाहरणका लागि EUR 10.000 एक ऋण लिन चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं छूट deducting पछि पर्याप्त पैसा नहुन सक्छ। त्यसकारण, तपाईंले सम्बोधित उच्च उधार क्रेडिट रेकर्ड गर्नु पर्छ जुन यसले पहिले नै यो खातामा फरक फरक पार्दछ।
यद्यपि, छूटको कारण, कम नामांकित ब्याज दरहरू अक्सर सहमत छन्। प्रभावकारी ब्याज दरले बताईएको कितनी ब्याज दरहरू अर्जित गरिन्छ, खातामा लिईन्छ ब्याज दर र असहयोग।
अघिल्लो लेखडायपर झोला
अर्को लेखअन्तिम ऋण